အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆာလီဘာ - Arsenal Myanmar News
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ စပါးစ်အသင်းတို့ မြောက်လန်ဒန်ကနေ အပြိုင်လုခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ်နောက်ခံလူ ဝီလီယမ် ဆာလီဘာအနေနဲ့ စပါးစ်ကို ကျော်ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံအကြောင်းကို ပြင်သစ်အားကစားသတင်းဌာန လေကီပ်နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ပြင်သစ်ယူ-၂၀ နောက်ခံလူအတွက် စိန့်အက်တီယန်ဘက်က တောင်းဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းကို မြောက်လန်ဒန်နှစ်သင်းစလုံးက သဘောတူခဲ့ချိန်မှာ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကတော့ ကစားသမားရဲ့ ရွေးချယ်မှုသာဖြစ်ခဲ့ပြီး သူက အာဆင်နယ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာမှာ အစဉ်အလာနဲ့ သမိုင်းကြောင်းက အဓိက ကျခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာလီဘာက လူငယ်ကစားသမားဘဝမှာ စိန့်အက်တီယန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ နှိုင်းယှဉ်သွားခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ လက်ရှိ အနေအထားက အကောင်းဆုံးမှာ ရှိမနေပေမယ့် သမိုင်းကြောင်း၊ ပြင်သစ်ကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းရဲ့ လိုဂိုကို မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲက ရွေးချယ်ချင်သွားတာလို့ ပြောပြပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
“အာဆင်နယ်ကိုတော့ စစချင်းကတည်းက ကြွေခဲ့ရတာလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ဒီအသင်းမှာက ကျွန်တော်တို့တွေ ကောင်းကောင်းသိတဲ့ ပြင်သစ်ကစားသမားတွေ ကစားခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းသုံးလေးနှစ်မှာ အသင်းရဲ့ ပုံစံက မကောင်းပေမယ့် စိန့်အက်တီယန်လိုပဲပေါ့ဗျာ၊ အသင်းရဲ့ လိုဂိုတံဆိပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေက ကျွန်တော့်ကို ရွေးချယ်စေခဲ့တာပါပဲ။ အမြဲပဲ စိတ်ထဲ ရှိခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး ဒီကို ပြောင်းဖို့ တုံ့ဆိုင်းမနေခဲ့ပါဘူး”လို့ ဆာလီဘာက ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာလီဘာက ပြင်သစ်ဖလားဖိုင်နယ်ကို လွဲချော်ခဲ့ရလို့ စိတ်မကောင်းပေမယ့် သူ့အတွက် သဘောတူညီမှုရဖို့ နှစ်သင်းစလုံးက ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကို နားလည်ကြောင်းနဲ့ အစိမ်းရောင် စိန့်အက်တီယန်တွေအတွက် ကစားမပေးနိုင်တော့ပေမယ့်လည်း အားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ စပါးဈအသငျးတို့ မွောကျလနျဒနျကနေ အပွိုငျလုခဲ့ရတဲ့ ပွငျသဈနောကျခံလူ ဝီလီယမျ ဆာလီဘာအနနေဲ့ စပါးဈကို ကြျောပွီး အာဆငျနယျအသငျးကို ရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပုံအကွောငျးကို ပွငျသဈအားကစားသတငျးဌာန လကေီပျနဲ့ တှဆေုံ့ရာမှာ ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ပွငျသဈယူ-၂၀ နောကျခံလူအတှကျ စိနျ့အကျတီယနျဘကျက တောငျးဆိုတဲ့ ဈေးနှုနျးကို မွောကျလနျဒနျနှဈသငျးစလုံးက သဘောတူခဲ့ခြိနျမှာ ပွောငျးရှဖေို့ကတော့ ကစားသမားရဲ့ ရှေးခယျြမှုသာဖွဈခဲ့ပွီး သူက အာဆငျနယျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ရာမှာ အစဉျအလာနဲ့ သမိုငျးကွောငျးက အဓိက ကခြဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာလီဘာက လူငယျကစားသမားဘဝမှာ စိနျ့အကျတီယနျအသငျးကို ပွောငျးရှဖွေ့ဈခဲ့သလိုမြိုးပဲ နှိုငျးယှဉျသှားခဲ့ပွီး အသငျးရဲ့ လကျရှိ အနအေထားက အကောငျးဆုံးမှာ ရှိမနပေမေယျ့ သမိုငျးကွောငျး၊ ပွငျသဈကစားသမားတှနေဲ့ အသငျးရဲ့ လိုဂိုကို မွငျလိုကျတာနဲ့ စိတျထဲက ရှေးခယျြခငျြသှားတာလို့ ပွောပွပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
“အာဆငျနယျကိုတော့ စစခငျြးကတညျးက ကွှခေဲ့ရတာလို့ပဲ ပွောရမှာပေါ့။ ဒီအသငျးမှာက ကြှနျတျောတို့တှေ ကောငျးကောငျးသိတဲ့ ပွငျသဈကစားသမားတှေ ကစားခဲ့တာပါ။ နောကျပိုငျးသုံးလေးနှဈမှာ အသငျးရဲ့ ပုံစံက မကောငျးပမေယျ့ စိနျ့အကျတီယနျလိုပဲပေါ့ဗြာ၊ အသငျးရဲ့ လိုဂိုတံဆိပျနဲ့ ပရိသတျတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ရှေးခယျြစခေဲ့တာပါပဲ။ အမွဲပဲ စိတျထဲ ရှိခဲ့တဲ့ အသငျးဖွဈပွီး ဒီကို ပွောငျးဖို့ တုံ့ဆိုငျးမနခေဲ့ပါဘူး”လို့ ဆာလီဘာက ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာလီဘာက ပွငျသဈဖလားဖိုငျနယျကို လှဲခြျောခဲ့ရလို့ စိတျမကောငျးပမေယျ့ သူ့အတှကျ သဘောတူညီမှုရဖို့ နှဈသငျးစလုံးက ကွိုးစားခဲ့တယျဆိုတာကို နားလညျကွောငျးနဲ့ အစိမျးရောငျ စိနျ့အကျတီယနျတှအေတှကျ ကစားမပေးနိုငျတော့ပမေယျ့လညျး အားပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-24T08:27:25+00:00	July 24th, 2020|News|Comments Off on အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆာလီဘာ